ITALIA VS ALBANIA: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! – Gool FM
ITALIA VS ALBANIA: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
Raage March 24, 2017
(Palermo) 24 Maarso 2017 – Waxaa caawa gegada Renzo Barbera ee magaalada Palermo ku wada ciyaaraya xulalka Talyaaniga iyo Albani oo ciyaaraya isreeb-reebka Koobka Adduunka 2018 iyagoo ku wada jira guruub G, waana kulan xiise leh waayo Albania ama Gorgorrada Guduudan waxaa wata macallinka reer Talyaani ee Giani De Biasi.
Macallin Giampiero Ventura oo ah nin weerarka aaminsan ayaa doonaya inuu xooro sheekadii Talyaaniga la xiriirin jirtey daafaca taasoo inay daaqadda kasii baxayso ay xitaa ka muuqatey xagaagii Euro 2016 ee la qabtay koobka Qaramada Yurub isagoo kusoo gelaya 4-2-4.
Daafaca waxaa baalasha buuxinaya De Sciglio iyo Zappacosta, halka qalbiga daafaca ay buuxinayaan Bonucci iyo Barzagli, halka dhexda ay hayaan Verratti iyo De Rossi, iyadoo weerarka ay baalasha ka xirayaan Insigne iyo Candareva, iyadoo ay weerarka dhexe wada joogaan Immobile iyo Belotti.
Inter Milan oo heshiis hordhac ah oo shakhsi ah la gaartey Stefan de Vrij
SAWIRRO XUL AH: Dekedda oo ku sii dhawaatay hoggaanka horyaalka iyo Elman oo ka badisay Banaadir